FAMPANDROSOANA - TOAMASINA : Hamboarina ho manara-penitra ny Bazarikely sy Esplanade Ambony
Tsy nivadika tamin’ny teny sy toky fampanantenana nataony ny Ben’ny tanànan’i Toamasina renivohitra, Elisée Ratsiraka ny amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ny tanàna. 23 juin 2017
Amin’izao fotoana izao, dia fametrahana fotodrafitrasa goavana momba ny tsena no tetikasa goavana hapetraka ao an-toerana.
Eny Bazarikely sy Esplanade ambony no hametrahana io tsena manara-penitra io. Ny zava-misy mantsy dia efa feno ireo mpivarotra ny tsena Bazarikely ka izao hiroso amin’ny fanitarana sy fametrahana fotodrafitrasa vaovao izao ny Kaominina. Aorian’ny “Bazaribe, bazary dépôt” dia ity hapetraka ity no anisany tsena manara-penitra fahatelo misy eto Toamasina.
Raha ny fampitam-baovao nomen’ny tompon’andraikitra ambony iray eo anivon’ny kaominina dia ny 7 jolay ho avy izao no hiroso amin’ny fametrahana ny vato fehizoro ny tompon’andraikitra mahakasika ny fananganana izany tetikasa lehibe izany. Na tsy mbola manomboka akory aza ny asa dia efa nidera sahady ny finiavana asehon’ny Ben’ny tanàna Elisée Ratsiraka ireo mpivarotra eto Toamasina. Irian’izy ireo fatratra ny hahavitan’izany, ary milaza ny hanaraka sy hanaiky ireo toromarika sy fandaminana rehetra mandritra ny fanamboarana ny fotodrafitrasa izy ireo.